माया सम्झेर मुग्लानबाट फर्की आउँदा « Kalakhabar
प्रकाशित मिति : आईतवार, २७ श्रावण २०७५ ११:२९
‘मलाई सधैं यसरी नै माया गरिरहन्छौ दीपक?’ फेवाताल छेउ तालबाराही मन्दिर सामुन्ने दीपकको अँगालोमा बेरिएकी श्रुती बिस्तारै बोली।
‘तिमी मेरी सास हौ श्रुती, तिमी बिनाको म र पीपल बिनाको चौतारीमा के फरक?’ कसिलो हातको गाँठो फुकाउँदै दुवै हातले श्रुतीको अधर आफूसामू उठाउँदै जवाफ दियो दिपकले। हुन पनि श्रुतीबिना दिपक एक्लो वर थियो, नितान्त एक्लो। असुहाउँदो।
‘घर हाम्रो पोखरा’ भन्ने फेसबुक पेजमा जोडिएको दीपकले त्यहि पेजमा श्रुती गुरुङलाई भेट्यो। तुरुन्तै प्रोफाइल खोल्यो। लठ्ठ पर्यो। निमेषभरमै रिक्वेष्ट पठाउन खोज्यो तर मिलेन। म्यासेन्जरमा एड गरेर म्यासेज पठायो– हाई, म दीपक, पोखरा नै हो घर, मलाई साथी बनाउ न है’ यस्तै यस्तै।
‘अँ दीपक, एम आई राइट?’ सेतो कुर्तासलवारमा सजिएर आएकी श्रुती उत्साहित भई।
‘ह..जुर,’ अक्मकायो दीपक। आहा ! कति राम्री छे श्रुती, जति हेरे पनि नपुगने ! झन् सेतो पहिरनमा त सेताम्य माछापुच्छ्रे जस्तै खुलेकी मनोहर देखिएकी छ। मिठो मुस्कानसँगै लगभग बन्द हुन खोज्ने आँखा अनि बायाँ गालामा चन्द्ररुपी डिम्पल, साँच्ची चन्द्रमुखी छे श्रुती।
‘ए ! के हेरेको? केटी मान्छे कहिल्यै देखेको छैनौ र?’ मन्द मुस्कुराई श्रुती।
‘हैन देखेको छु तर तिमीजस्तो..।’
‘भो भो, फेसबुकमा मात्र भनेको साँच्चै पनि गफाडी रै’छौ तिमी त, आऊ यता बस,’ श्रुतीले भनी।
दिनप्रतिदिन श्रुती–दीपक प्रेमपाशमा परिसकेका थिए। घर नजिकको जंगलमा ‘ढुकुर….कुर’ भन्दै ढुकुरले सुसेल्ने मधुर स्वरमा आफ्नै श्रुतीको प्रेमास्पद आवाज पाउँथ्यो दीपक। बिजुलीको तारमाथि बसेर कानेखुसी गरिरहेका चखेवा जोडी हेरेर टोलाउँथ्यो अनि आफ्नी श्रुतीलाई सम्झेर स्वप्नद्रष्टामा रमाउँथ्यो।
‘किन किन तिम्रो तस्वीर मलाई निको लाग्छ…..’ गुलाम अलीको सुमधुर आवाजसँगै आँखा चिम्लिएर ओछ्यानमा पल्टिरहेको दीपकको मोबाइल भाइब्रेट भयो। रातको साढे ११ बजे श्रुतीले फोन गरेकी थिई।
‘अँ सानु निन्द्रा लागेन?’ उताबाट कुनै आवाज आएन।
‘हेलो, यति धेरै माया पचाउन सक्दिनँ के,’ दीपकको बोली नसकिँदै श्रुती एक्कासी रुन थाली। उसको रुवाइ सुन्दा लाग्थ्यो मनभित्र ठूलो ज्वालामुखी विष्फोट भएर ज्वारभाटा निस्किरहेका छन्।
‘श्रुती के भयो भन न, तिमी यसरी रोएको कसरी सुन्न सक्छु यार? प्लिज..,’ दीपकको ओठ एकाएक काँप्न थाल्यो। अनायासै आँशु बग्न थाल्यो। सायद उनीहरुको तन दुइटा तर मन एउटै भैसकेको थियो। श्रुतीको मन दीपकको नयनबाट पनि बगिरहेको थियो।
‘मलाई भोलि बिहान सात बजे महेन्द्र पुलमा भेट, इट इज अर्जेन्ट,’ यति भनेर फोन काटी श्रुतीले। दीपकले फेरि डायल गर्यो। स्विच अफ…। रातभर सयौं कोल्टे फेर्यो। निदाउन सकेन। अहिले नै कुदेर श्रुतीको घरमा जान नचाहेको होइन मनले तर दिमागले आँट दिएन।
‘दीपक मलाई भगाएर लैजाऊ, बुवाले एउटा लाउरेसँग विहेको कुरा छिनिसक्नुभएछ। आजै साइपाटा ल्याउने कुरो छ। तिमीबाहेक अरुसँग त कुरा भ’को नि सुन्न सक्दिनँ।’
‘आमा ढोका खोल्नुस् त,’ कालो अनुहार झन कालो बनाउँदै बोल्यो दीपक। सातो उड्यो। ढोका खोल्न बुवा आउनुभएको छ।
‘अँ काँ गएर आइस ब्यानै?’
‘महेन्द्रपुल गाथेँ, यिनलाई भगार ल्याकोम,’ ओठ मात्र चलाएर बोल्यो दीपक।
सुन्नासाथ गहुँगोह्रो वर्णका दीपकका बा दीपकभन्दा काला भए, ‘के बतुराउँछ यो? भित्र मुन्टी।’
‘एउटा छोरो, त्यै पनि सबका अगाडि शिर निहुराउने बनाइस् है। शत्रु हँसाउने भैस्?’ आँखा रसिलो पार्दै आमा कराउन थालिन्। दीपक र श्रुतीले ठाडो शिर गर्न सकेका थिएनन्।
‘म मुग्लान जान्छु श्रुती,’ दलिनतिर हेर्दै भन्यो।
टाउको उठाएर दीपकतिर हेर्दै भनी, ‘किन जानुपर्यो? पर्या छैन।’ उसको स्वर रुञ्चे भयो।
‘हेर मायाले मात्र खान लाउन पुग्दैन। जिन्दगी लामो छ। उमेर छउञ्जेल त हो कमाउने। पछि खाने मुख बढ्छन्, जिम्मेवारी बढ्छ, झन् समस्या हुन्छ।’
‘विदेशको विकल्प छैन र?’
‘यहाँ बसेर क्यार्नु, विदेशाँ लेबरी गरेर नि बीस–चालिस हजार कमाइहाल्छु। बा–आमा नि डाडाँमाथिको घाम भइसक्नुभो,’ दीपकको मुटुमा गाँठो परेजस्तो हुन्छ, बोली अडिन्छ।
‘तिम्रो आलिङ्गनको अभावमा कैलेसम्म छट्पटिने म?’
‘फोन गरिरहन्छु, छुट्टि मिल्नासाथ आइहाल्छु नि लाटी। दुई-चार वर्षमा अलिअलि जम्मा गर्न सकियो भने यतै केई बेपार-सेपार गरेर बसौंला नि,’ यति भनिसकेर लामो सास फेर्छ दीपक। मौन स्वीकृति दिन्छे श्रुती।
दीपक–श्रुती विपरित दिशामा फर्केर सुतेका मात्र छन्। निदाएका छैनन्। दुवैका आँखा विछोडको भयले रसाइरहेका छन्। लाग्दैछ शरीरबाट मुटु नै अलग्गिएर जाँदैछ कतै। टाढा…।
‘श्रुती !’ घर नपुग्दै बाटैबाट सकिनसकी चिच्याउँछ दीपक।
‘आमा श्रुती खोई त?’
‘हामीलाई डुबाएर गई वावु, तेरो सपना उडाएर गई,’ गहभरी आँशु पार्दै आमाले भनिन्।
‘काँ गै?,’ आँखा च्यातेर बोल्छ दीपक।
‘रामबजारतिरको लाहुरे हो रे,’ धोतीको फुर्कोले आँखा पुछ्दै भनिन् आमाले।
‘अनि पैसा,’ ऊ हतासियो।
‘खै वावु, तैंले पठाको फुटेको टाँक नि देखाईन हाम्लाई त। केही भनुँ भने बोलिसक्नु थिएन…।’